रातमा कुन फलफूल खाने ? « Yoho Khabar
रातमा कुन फलफूल खाने ?
काठमाडौँ – रातको समय अचानक भोक लागेमा के खाने गर्नुभएको छ ? यस्तो वेला भोक मेटाउन तपाईंले चकलेट वा स्न्याक्सको सहारा लिइरहनुभएको छ भने गलत गर्नुभएको छ ।
सुत्नुअघि केरा, स्याउ, नासपाती लगायतका फाइबरयुक्त फलफूल खान सक्नुहुन्छ । तर, आयुर्वेदका अनुसार खाना खाएको केही समयपछि मात्र फलफूलको प्रयोग गर्नु स्वस्थकर हुन्छ । खाना र फलफूल एकैपटक प्रयोग गर्दा पचाउन समस्या हुन्छ ।
सुत्नुअघि फलफूलको प्रयोग गर्दा आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । फलफूलबाट भिटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल र फाइबरको मात्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्छ । अस्वस्थकर चिनी र फ्याटयुक्त स्न्याक्सको प्रयोगले स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ ।